Dhamaadka taariikhda sheekada, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Wax badan ayaa jira oo loo qoro
Waqti ka hor, ninka cilmiga ku xeel dheer ee cilmiga iyo ixtiraamka leh ee Stephen Hawking ayaa dhintay. Qolalka wargeysyada ayaa sida caadiga ah sifiican uga diyaariya dhacdooyinka si marka ay dhacdo dhimashada dadka caanka ah ay si guud uga warbixin karaan nolosha qofka dhintay - oo uu kujiro Stephen Hawking. Wargeysyada badankood waxay ka koobnaayeen laba illaa saddex bog oo qoraal ah oo leh sawirro wanaagsan. Xaqiiqada ah in wax badan laga qoro isaga ayaa lafteedu ah sharaf u leh qof cilmi baaris ku sameeyay sida caalamku u shaqeynayo iyo halganka shaqsiyeed ee ka dhanka ah cudurka daalka badan ayaa dhammaanteen aad iyo aad noo wada jecleystay.
Laakiin dhimashadu ma waxay tahay dhamaadka sheekada noloshiisa qofka? Ma jiraan wax intaa ka badan? Dabcan, tani waa su’aal da ’ah oo aan baaritaan cilmi ah laga jawaabi karin. Qof waa inuu ka soo noolaadaa kuwii dhintay oo uu noo sheegayaa. Baybalku wuxuu sheegayaa in Ciise sidaas sameeyay - taasina waa aasaaska iimaanka Masiixiyiinta. Wuxuu ka soo sara kacay kuwii dhintay si uu noogu sheego in ay jiraan waxyaabo badan oo ku saabsan sheekada nolosheenna inta aan ka fikiri karno. Dhimashadu waa joogsi intii la goyn lahaa. Waxaa jira rajo dhaafsiisan dhimashada.
Wax kastoo qoraal ah oo ku saabsan noloshaada, waxaa jira waxyaabo badan oo lagu daro. Sheekadaada ha sii wado in Ciise qoro.